Kpọọ anyị: +86 13167223337
Ihe nyocha ihu ihu
MC10 iPad gburugburu
Igwe nyocha akpụkpọ anụ
M11 WiFi njikọ
M12 na ihuenyo
M906 WiFi njikọ
M906S nwere ihuenyo
Ihe nyocha ahụ
Ihe ngosi 3D-R
Igwe mara mma
Igwe nyocha akpụkpọ anụ ISEMECO dị elu na-egosi na ihe ngosi MEVOS na Guangzhou
ISEMECO bụ igwe nyocha anụ ahụ dị elu maka ndị ọkachamara. Ọ bụ Shanghai Mayskin ụlọ ọrụ mere na haziri ya na 2020. Ọ nwere 3 ụdị ìhè ụdịdị-RGB, UV na CPL ọkụ. Dabere na ọkụ atọ a, enwere ike nyochaa onyonyo 9 n'ikpeazụ. Ihe onyonyo 9 HD ndị a nwere ike inye aka chepụta ...GỤKWUO »
Kedu otu esi elekọta na nchebe nke akpụkpọ ahụ n'oge mgbụsị akwụkwọ?
Oge nzipu: Nov-22-2021
Ka ihu igwe na-akawanye oyi, akpụkpọ ahụ ga-adị n'okpuru nrụgide dị ukwuu n'ihi ọdịda mberede nke okpomọkụ, n'ihi ya, ọ dị mkpa ka echekwa ya ma chekwaa ya n'oge. Ya mere, otu esi eme ezigbo nlekọta anụ ahụ na nchebe? 1. Exfoliating N'ihi ike ultraviolet ụzarị n'oge okpomọkụ, stratum corneum nke akpụkpọ ...GỤKWUO »
Oge nzipu: Feb-26-2021
Ụbọchị nke iri na ise nke ọnwa mbụ bụ ememme ndị China n'ihi na a na-akpọ ọnwa mbụ nke ọnwa yuan na n'oge ochie ndị mmadụ na-akpọ abalị Xiao. Ụbọchị nke iri na ise bụ abalị mbụ ịhụ ọnwa zuru ezu. Ya mere, a na-akpọkwa ụbọchị Yuan Xiao Festival na C ...GỤKWUO »
Ngwa ngwa nke nyocha ihe mejupụtara ahụ na njikwa ahụike
Oge nzipu: Feb-05-2021
Site na mmepe nke ọha mmadụ, ọganihu na-aga n'ihu nke ụkpụrụ ndụ ihe onwunwe, mmepe nke nkà na ụzụ ọgwụ, ụdị ahụike nke oge a na ebe obibi dị ugbu a, ọnọdụ ndụ na mmetụta ahụike, ndụ ndị mmadụ, ndụ, ndụ ndụ chọrọ ...GỤKWUO »
Kedu ihe bụ nyocha ihe mejupụtara ahụ?
Oge nzipu: Jan-25-2021
Ihe nyocha ihe mejupụtara ahụ, nke a na-ahụta ka ọ bụ ọmarịcha mmezu nke ụlọ ọrụ ahụike. Sistemụ ndụmọdụ ndụmọdụ ahụike na-ebelata ibu, onye ndụmọdụ ahụike gị, na-enye data nyocha ahụike onwe maka onye nyocha ọ bụla. Okwu mmalite maka nyocha abụba anụ ahụ dijitalụ...GỤKWUO »
Kedu otu ị ga-esi chọpụta ngwaọrụ dabara adaba maka nlekọta anụ ahụ gị?
Oge nzipu: Jan-15-2021
Enwere ụdị nyocha akpụkpọ anụ abụọ dị na ahịa, olee otu ị ga-esi chọpụta ngwaọrụ kwesịrị ekwesị? Ụdị iPad, ụdị PC. Sistemụ iOS nke iPad, ọrụ dị nro karịa, yana onye ahịa ime nnwale, enwere ike were iPad n'oge ọ bụla gaa ebe ọ bụla maka ntuziaka nyocha ndị ahịa…GỤKWUO »
Kedu mgbe ị ga-enweta nyocha anụ ahụ?
Oge nzipu: Jan-08-2021
Nke a bụ ihe na-echegbu ọtụtụ ndị na-eche banyere nlekọta anụ ahụ. Otu ugboro n'ọnwa bụ ihe kacha mma. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-eche maka ahụike akpụkpọ ahụ gị ma chọọ ịma ma ngwaahịa ndị ị na-eji na-arụ ọrụ, yabụ ịnwe ya ugboro abụọ n'ọnwa na-eme ka o doo anya na ...GỤKWUO »
Meicet's Christmas Party
MEICET bụ onye na-eweta teknụzụ ịma mma nwere ọgụgụ isi nke raara onwe ya nye R&D ịma mma yana nyiwe ọrụ ịntanetị nke ihe. Akara ya "MEICET" na-elekwasị anya na nhazi na ịkekọrịta ozi ịma mma ahụike yana nyocha akpụkpọ ahụ dijitalụ, na-enye ...GỤKWUO »
Gịnị mere anyị ji elekọta akpụkpọ anyị?
Onye ọ bụla chọrọ ka akpụkpọ ahụ dị mma ka ọ na-aga maka usoro kachasị ewu ewu iji mee ka akpụkpọ ahụ dị mma. Otú ọ dị, onye ọ bụla nwere ụdị akpụkpọ anụ dị iche iche na ụzọ kachasị mma iji chọpụta ụdị akpụkpọ anụ gị bụ ịnweta nyocha akpụkpọ anụ ọkachamara. Enwere ọtụtụ uru nke nyocha dị otú ahụ. Ị nwere ike...GỤKWUO »
Oge nzipu: Dec-04-2020
International Medicine of Anti-Aging and Aesthetics Congress (IMAAC) na-ewere ọnọdụ na Shenzhen, China, na 4-6 Disemba, 2020. Mgbe mbipụta mbụ nke ọma nke ọma na 2017 nwere ihe karịrị ndị bịara 4,000, anyị nwere obi ụtọ ịlaghachi na Shenzhen ọzọ na December a. . Ebumnuche f...GỤKWUO »
Zijin International Aesthetics and Medicine Joint Conference bụ otu n'ime ọgbakọ ụlọ ọrụ kacha nwee ikike na ngalaba ahụike na ahụike, yana ọ bụkwa ọgbakọ ngosi ihe ngosi agụmakwụkwọ ọkachamara ama ama na mpaghara Eshia-Pacific. Nzukọ ahụ...GỤKWUO »
Ihe ọmụma ụlọ ọrụ
Oge nzipu: Nov-27-2020
Kedu ihe bụ igwe nyocha anụ ahụ? Ọ bụ nyocha akpụkpọ ahụ ọkachamara na ndenye ọgwụ emebere iji chọpụta nsogbu akpụkpọ ahụ na mgbanwe akpụkpọ ahụ. Ozugbo emechara nyocha ahụ, mmemme ahụ ga-akwado ngwaahịa ọgwụgwọ anụ ahụ maka njikwa akpụkpọ ahụ ahaziri.GỤKWUO »
Biko tinye nkọwa ajụjụ gị dị ka aha ngwaahịa, nọmba nlereanya, ọnụọgụ, wdg. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, biko kpọtụrụ anyị n'ịntanetị, daalụ.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Shanghai May Skin Information Technology Co., Ltd
ISEMECO Igwe nyocha akpụkpọ anụ dị elu Sh...
ISEMECO bụ igwe nyocha anụ ahụ dị elu maka ndị ọkachamara. Ọ bụ Shanghai Mayskin ụlọ ọrụ mere na haziri ya na 2020. Ọ nwere 3 ụdị ìhè ụdịdị-RGB, UV na CPL ọkụ. Dabere na ndị a ...
Otu esi elekọta na nchedo akpụkpọ i...
Ka ihu igwe na-akawanye oyi, akpụkpọ ahụ ga-adị n'okpuru nrụgide dị ukwuu n'ihi ọdịda mberede nke okpomọkụ, n'ihi ya, ọ dị mkpa ka echekwa ya ma chekwaa ya n'oge. Ya mere, otu esi eme ezigbo nlekọta anụ ahụ na nchebe? 1. Exfoliati...
Ụbọchị nke iri na ise nke ọnwa mbụ bụ ememme ndị China n'ihi na a na-akpọ ọnwa mbụ nke ọnwa yuan na n'oge ochie ndị mmadụ na-akpọ abalị Xiao. Ụbọchị 15th bụ f...
Nweta ọnụahịa zuru ezu